We.com.mm - သင် Single ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အချက်များ
သင် Single ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ အချက်များ
4 years ago by Zen J'Fry
ကဲ့ …. သင်ဟာ Single တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာလား။ Single ပဲဖြစ်ဖြစ် RS နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အတွက် ဘယ်အရာမဆို အဆိုးနဲ့အကောင်းဆိုတာ အမြဲတမ်းဒွန်တွဲနေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဓိကကတော့ ကိုယ့်စိတ်ပါပဲ။ Single ဖြစ်နေလို့ စိတ်မချမ်းသာ မပျော်ရွှင်ပဲ မနေသင့်ဘူး။ Single ဖြစ်လို့ သင်လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်… အဲထဲမှာမှ တချို့အချက်တွေကတော့ ……
Best Friends တွေနဲ့ ခရီးထွက်ပါ
သင့်ချစ်တဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပါ။ ပိတ်ရက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြာရက်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးစဉ်ဆွဲလိုက်ပါ။ သင်မရောက်ဖူးတဲ့ Exotic ဖြစ်တဲ့ နေရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် သွားချင်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကမ်းခြေ စသဖြင့်နေရာတွေကို သင့် Best Friends တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ။ ဒီခရီးစဉ်ဟာ သင့်အတွက် အရမ်းတန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်။
လက်ထပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါ
ပိတ်ရက်လေးမှာ လက်ထပ်ပြီးသားသင့်သူငယ်ချင်းတွေရှိရင် သူတို့ဆီသွားလည်ပါ။ တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကောင်းတာတွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘယ်လို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်ပါ။ သင့်အလှည့်ကျရင် ဘယ်လို ရိုမန်တစ် ဆန်ဆန်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာ လေ့လာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင်လည်း နောင်တစ်ချိန်ကျရင် RS နဲ့ဖြစ်သွားရင် ဖြစ်မှာပဲလေ။ သိထားရင်တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။
တချို့တွေက Single အဖြစ်နဲ့ နေလာတာကြာပြီးဆိုရင် ချစ်သူရည်စား အရမ်းလိုချင်ကြတယ်။ အဲအချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ငြိသွားတာနဲ့ တန်းပြီး ချစ်ကြိုက်သွားကြရော။ တကယ်အဲလို မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ်လက်တွဲရမယ့်သူကို အရင်ဦးဆုံး လေ့လာပါ။ အချိန်ယူပါ။ အချစ်စစ်မှန်ရင် တန်ပြန်သက်ရောက်မှုဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ ဆန္ဒမစောပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်နိုင်မယ့်သူ ကိုယ်ကလည်း တကယ်ချစ်နိုင်တဲ့သူကို ရွေးချယ်ကြပါလို့။
Relationship တခုမှာ ပျော်ရွှင်ဖို့၊ ကျန်းမာဖို့၊ ခိုင်မာဖို့ ဆိုတာ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ ကိုယ်ဘာကိုစိတ်ဝင်စားတာလဲ ကိုယ့်ကို ဘယ်အရာတွေက ပျော်ရွှင်အောင် ထားပေးနိုင်လဲဆိုတာ နားလည်နိုင်ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ် Sinlge ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာလဲဆိုတာ သေချာသိအောင် လေ့လာပါ။ ကိုယ့်ဘဝရည်မှန်းချက်၊ ကိုယ်ဘာကိုချစ်တတ်လဲဆိုတာ လေ့လာပါ။ ရှေ့ဆက် ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့် ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ဟာ ကိုယ့်ကို နားလည်ပေးနိုင်သူ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ ဘဝရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို အားပေးတဲ့သူ ဖြစ်အောင် သေချာရွေးချယ်ပါ။ မည်သည့်အရာမဆို အပေးအယူဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့ Relationship တခု ဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန်ယုံကြည်နားလည်မှုရှိတဲ့ သူကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
Single ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပါ။ အချိန်ပေးပြီး Gym ဆော့ပါ။ အားကစားလုပ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် နောင်တစ်ချိန် ချစ်သူရည်စားရသွားရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲတမ်း ယုံကြည်မှုအပြည့် ရှိနေမှာလေ။
Single ဖြစ်ရတာဟာ တကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါကို စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေ့လာပါ။ ခရီးထွက်ပါ။ Single ဖြစ်လို့ အထီးကျန်နေစရာမလိုပါဘူး။ ညညတွေဆို လွတ်လွတ်လပ်လပ် Night Out ထွက်ပါ။ စိတ်ပင်ပန်းမှုတွေကို ခေါက်ထားပါ။ ဒီအချိန်ဟာ သင်ဘာကြိုက်လဲ ဘာလုပ်ချင်လဲ ဘယ်လိုပျော်အောင် နေရမလဲဆိုတဲ့ အချိန်သာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘဝလက်တွဲဖော် ချစ်သူရည်စားကို အချိန်ယူပြီးရှာဖွေပါ။ ဒါကြောင့် Single ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ပျော်ပစ်လိုက်ပါ။
3 years ago by Nanda Myint Ko
သင့်ကို ဈေးဗန်းခင်းနေမှန်း သတိထားရမယ့်အချက် ၅ ချက်
3 years ago by sweet
Francia Raisa က ဘာကြောင့် Selena Gomez အတွက် ကျောက်ကပ်ကိုလှူပေးခဲ့တာလဲ
သင် အချစ်ကြောက်ရောဂါ ဖြစ်နေပြီလား?
ယောက်ျားလေးတွေ အချစ်ဦးကို မမေ့နိုင်တဲ့အကြောင်းအရင်းများ
သင်မသိသေးတဲ့ ဒူးရင်းသီးမီးဖုတ်ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်များ
Huawei ဖုန်းတွေကို စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ ပြန်ရောင်းဈေး " သုညဒေါ်လာ " အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီ
ဟယ်ရီပေါ်တာဇာတ်လမ်းကြိုက်သူတွေဟာ လူကောင်းတွေဖြစ်ကြောင်း သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာတွေ့ရှိ
တက်တူးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မြန်မာပြည်က ပုရိသ(၁၁)ယောက်
3 years ago by Julia
8 months ago by WaiLin